'I-Audubon Suite' Studio w/ Pier kuMlambo iArroyo! - I-Airbnb
'I-Audubon Suite' Studio w/ Pier kuMlambo iArroyo!
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguEvolve
*Nceda uqaphele enye iyunithi yokurenta iholide ikwindawo kwaye umninikhaya uhlala kwisiza kwindawo eyahlukileyo ngokupheleleyo*
Coca ikhalenda ukuze uhambe ngokulula 'eAudubon Suite,' isitudiyo sokurenta iholide esilala 2 kwisiXeko saseArroyo! Esi situdiyo silungiselelwe kakuhle ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zasehlotyeni, kunye ne-grill yamalahle kunye ne-pier ekhanyisiweyo yokuloba onayo! Singasathethi ngendawo ephambili kufutshane neSouth Padre, iHarlingen, kunye neBrownsville- le ndawo iyindawo entle yokubambisa!
*QAPHELA: Nakuphi na ukuhlala kweentsuku ezingama-30 okanye ixesha elide baya kufumana isaphulelo sika-30%
Isitudiyo: King Bed (inokuguqulwa ibe ziibhedi ezimbini ezingamawele)
Qala intsasa nganye ngekomityi yekofu kwipatio enomthunzi, njengoko umntu omthandayo ephuma esiya kwi-pier ukuze aqale ngokuluma okukhulu kosuku. NgoMlambo i-Arroyo Colorado obonakala njengeyadi yakho yangaphambili kunye nepier efikeleleka ngokulula, ukuzonwabisa kuhambo lokuloba alunamsebenzi!
Ngaphakathi uya kufumana indawo egcwele intuthuzelo kunye nomtsalane. Chitha ngokuzolileyo emva kwemini ngencwadi elungileyo kwibhedi yegumbi lokuhlala, okanye uphumle ngemuvi ekwiscreen esisicaba seSmart TV. Ukuba ubuyise ukubanjiswa kwemini, uya kuba nekhitshi ngaphakathi, kunye ne-grill ekwabelwana ngayo ngaphandle, ukukunceda njengoko usenza isidlo saselwandle!
Qeda ubusuku kanye njengoko ubuqalile - ngaphandle kwi-pier, njengoko ukutshona kwelanga kunye nomlambo uba yimecca yokuloba ebusuku. Isikhululo sokuloba esikhanyisiweyo siqinisekisa ukuba ungakonwabela ixesha lokuzonwabisa elithandwayo lesixeko kude kube ngokuhlwa.
Xa amehlo adiniweyo eqalisa ukuthonga, phumla ngaphakathi kubusuku obuzolileyo phezu kwebhedi yenkosi, enokuguqulwa ibe ziibhedi ezimbini ezingamawele xa uceliwe.
Ukuhlala kanye kumda weArroyo Colorado, 'iAudubon Suite' ibonelela ngeemeko eziphambili zokuloba emanzini anetyuwa! Yiza nesithiyelo kwaye ubambe ithuba lokubamba i-trout yaselwandle enamachokoza, intlanzi ebomvu, iflounder, i-snook, okanye i-tarpon!
Abo bakhetha umhlaba phezu kolwandle baya kukuvuyela ukufumana iindidi ezininzi zeentaka ezihlala emhlabeni, iintaka ezikhuhlayo, kunye nezinye iintaka kulo mmandla. Qiniseka ukuba umise ngaseLaguna Atascosa National Wildlife Refuge, indawo yokuhlala egcwele umhlaba omanzi kunye nezilwanyana zasendle ezihlala emanzini.
Guqula indlela yakho yesiqhelo phambi komlambo kwaye uhambe ngesikhephe! IKayak ngaphaya kweArroyo Colorado, okanye uqhube iimayile ezingama-40 ukuhla ukuya kwiSiqithi sasePadre eMazantsi ukuze uhambe ngesikhephe kumanzi amakhulu aluhlaza weGulf of Mexico!
Izimvo eziyi-10 570